နည်းပညာပစ္စည်းတွေနဲ့ ခရီးသွားခြင်း – Gentleman Magazine
လူတွေဟာ နည်းပညာပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ ဘက်ထရီကို တလွဲ သုံးနေကြပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်းကို တိုစေပါတယ်။ အဲဒိပြသနာတွေကို ရှင်းလင်းနိုင်ဖို့ အကြံဉာဏ် လေးခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. အိတ်ထဲ မထည့်ပါနဲ့ ခရီးသွားရင် Laptop တွေကို အိတ်ထဲထည့်သယ်လာတာ လူတွေ လုပ်နေကြပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒိပစ္စည်းတွေကို ပါဝါဖွင့်ထားပြီး အပူလုံအိတ်ထဲ ထည့်ထားတာဟာ အပူလွန်ကဲစေပြီး ဘက်ထရီ သက်တမ်း တိုစေပါတယ်။ ပိတ်ထားရင်တောင် ဘက်ထရီကနွေးနေရင် အဲဒိအပူက အိတ်ထဲမှာ လုံနေပြီး အန္တရာယ် ရှိစေပါတယ်။ အတိတ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လစ်သီယမ် ဘက်ထရီတွေ အပူလွန်ပြီး ထပေါက်တာ အဲဒါကြောင့်ပါ။ လုပ်သင့်တာက ပါဝါဖွင့်မထားရင်တောင် ဘက်ထရီတွေ အေးနေကြောင်း စစ်ဆေးပြီးမှ အိတ်ထဲထည့်ပါ။ တတ်နိုင်ရင် အိတ်ထဲမထည့်ပဲ ယူလာပါ။
၂. သွားလာရင်း အားသွင်းတာ ခရီးသွားရင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပါ။ မဟုတ်ရင် မဟုတ်ကဟုတ်ကနေရာတွေမှာ အားသွင်းနေရတာမျိုး ကြုံနိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်ဆီဆိုင်က ပလပ်ပေါက်မှာ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာနဲ့ နောက်ဆုံး အများသုံးအိမ်သာတွေထဲမှာတောင် အားသွင်းနေရမှာပါ။ အဲဒိလို ကိုးလို့ကန့်လန့်နေရာတွေမှာ အားသွင်းရတာ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ကြုံနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အားသွင်းလို့တောင် မရပါဘူး။ အဲဒိအစား ဘက်ထရီအပိုတွေ ယူလာလိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Power Bank တွေ ဆောင်ထားတာက ပိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။
၃. အားသွင်းမှားတာ နောက်ဆုံးပေါ် Portable ကိရ်ိယာတွေဟာ လစ်သီယမ်ဘက်ထရီတွေ သုံးထားတာပါ။ အားလုံးဝ အကုန်သုံးလိုက်တာဟာ ဘက်ထရီသက်တမ်းကို တိုစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံဟာ ၁၀ရာနှုန်းအောက် ရောက်မှ အားသွင်းကြတာပါ။ တတ်နိုင်ရင် အဲဒိလိုမသုံးပဲ ဘက်ထရီကို ၄၀ နဲ့ ၈၀ ကြား ရောက်နေအောင် ထားပါ။ နောက်ဆုံးပေါ်ကိရိယာတွေမှာ အားပြည့်ရင် အလိုလို အားသွင်းရပ်ပေးတဲ့ စနစ် ပါပါတယ်။ တစ်ညလုံး အားသွင်းထားလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘက်ထရီနွေးလာရင် အားသွင်းရပ်ပေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
၄. ဘယ်ချိန်မှာ ပိတ်ရမလဲ လူတွေ ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဖုန်းပိတ်ထားတာက အမြဲဖွင့်ထားတာထက် ဘက်ထရီ သက်သာမလား၊ ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက် လုပ်နေတာက ဘက်ထရီ ပိုနာမလား ဆိုတာပါပဲ။ အမှန်က ခေတ်သစ် ပစ္စည်းတွေဟာ ဘက်ထရီ အထိမနာစေပဲ ဖွင့်နိုင် ပိတ်နိုင် ကြပါတယ်။ အားသွင်းချိန်ကတော့ နည်းနည်းထူးခြားပါတယ်။ လစ်သီယမ်ဘက်ထရီသုံး ပစ္စည်းတွေဟာ အားသွင်းချိန်မှာ ပါဝါပိတ်လိုက်ရင် ဘက်ထရီကို စီးတဲ့ လျှပ်စီးကြောင်း လျော့နည်းသွားစေပြီး ဘက်ထရီကို မထိခိုက်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ်တွေကတော့ ဘက်ထရီကို လုံးဝကျော်လိုက်ပြီး ပစ္စည်းကို ဒါရိုက် ပါဝါပေးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သင့်ပစ္စည်းကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို အဖွင့်အပိတ်လုပ်တယ်ဆိုတာ အရမ်းအရေးမပါပါဘူး။
လူတှဟော နညျးပညာပစ်စညျးတဈခုရဲ့ ဘကျထရီကို တလှဲ သုံးနကွေပွီး ဘကျထရီသကျတမျးကို တိုစပေါတယျ။ အဲဒိပွသနာတှကေို ရှငျးလငျးနိုငျဖို့ အကွံဉာဏျ လေးခုကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁. အိတျထဲ မထညျ့ပါနဲ့ ခရီးသှားရငျ Laptop တှကေို အိတျထဲထညျ့သယျလာတာ လူတှေ လုပျနကွေပါ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒိပစ်စညျးတှကေို ပါဝါဖှငျ့ထားပွီး အပူလုံအိတျထဲ ထညျ့ထားတာဟာ အပူလှနျကဲစပွေီး ဘကျထရီ သကျတမျး တိုစပေါတယျ။ ပိတျထားရငျတောငျ ဘကျထရီကနှေးနရေငျ အဲဒိအပူက အိတျထဲမှာ လုံနပွေီး အန်တရာယျ ရှိစပေါတယျ။ အတိတျမှာ ဖွဈခဲ့တဲ့ လဈသီယမျ ဘကျထရီတှေ အပူလှနျပွီး ထပေါကျတာ အဲဒါကွောငျ့ပါ။ လုပျသငျ့တာက ပါဝါဖှငျ့မထားရငျတောငျ ဘကျထရီတှေ အေးနကွေောငျး စဈဆေးပွီးမှ အိတျထဲထညျ့ပါ။ တတျနိုငျရငျ အိတျထဲမထညျ့ပဲ ယူလာပါ။
၂. သှားလာရငျး အားသှငျးတာ ခရီးသှားရငျ ကွိုတငျပွငျဆငျထားရမှာပါ။ မဟုတျရငျ မဟုတျကဟုတျကနရောတှမှော အားသှငျးနရေတာမြိုး ကွုံနိုငျပါတယျ။ ဓာတျဆီဆိုငျက ပလပျပေါကျမှာ၊ စားသောကျဆိုငျတှမှောနဲ့ နောကျဆုံး အမြားသုံးအိမျသာတှထေဲမှာတောငျ အားသှငျးနရေမှာပါ။ အဲဒိလို ကိုးလို့ကနျ့လနျ့နရောတှမှော အားသှငျးရတာ အခကျအခဲတှေ အမြားကွီး ကွုံနိုငျပါတယျ။ တဈခါတဈလေ အားသှငျးလို့တောငျ မရပါဘူး။ အဲဒိအစား ဘကျထရီအပိုတှေ ယူလာလိုကျပါ။ ဒါမှမဟုတျ Power Bank တှေ ဆောငျထားတာက ပိုအဆငျပွစေပေါတယျ။
၃. အားသှငျးမှားတာ နောကျဆုံးပျေါ Portable ကိရျိယာတှဟော လဈသီယမျဘကျထရီတှေ သုံးထားတာပါ။ အားလုံးဝ အကုနျသုံးလိုကျတာဟာ ဘကျထရီသကျတမျးကို တိုစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လူတှရေဲ့ သုံးပုံတဈပုံဟာ ၁ဝရာနှုနျးအောကျ ရောကျမှ အားသှငျးကွတာပါ။ တတျနိုငျရငျ အဲဒိလိုမသုံးပဲ ဘကျထရီကို ၄၀ နဲ့ ၈၀ ကွား ရောကျနအေောငျ ထားပါ။ နောကျဆုံးပျေါကိရိယာတှမှော အားပွညျ့ရငျ အလိုလို အားသှငျးရပျပေးတဲ့ စနဈ ပါပါတယျ။ တဈညလုံး အားသှငျးထားလို့ ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘကျထရီနှေးလာရငျ အားသှငျးရပျပေးတာ ပိုကောငျးပါတယျ။
၄. ဘယျခြိနျမှာ ပိတျရမလဲ လူတှေ ဝခှေဲမရ ဖွဈနတောတှေ ရှိပါတယျ။ ဖုနျးပိတျထားတာက အမွဲဖှငျ့ထားတာထကျ ဘကျထရီ သကျသာမလား၊ ပိတျလိုကျဖှငျ့လိုကျ လုပျနတောက ဘကျထရီ ပိုနာမလား ဆိုတာပါပဲ။ အမှနျက ခတျေသဈ ပစ်စညျးတှဟော ဘကျထရီ အထိမနာစပေဲ ဖှငျ့နိုငျ ပိတျနိုငျ ကွပါတယျ။ အားသှငျးခြိနျကတော့ နညျးနညျးထူးခွားပါတယျ။ လဈသီယမျဘကျထရီသုံး ပစ်စညျးတှဟော အားသှငျးခြိနျမှာ ပါဝါပိတျလိုကျရငျ ဘကျထရီကို စီးတဲ့ လြှပျစီးကွောငျး လြော့နညျးသှားစပွေီး ဘကျထရီကို မထိခိုကျအောငျ ကာကှယျပေးပါတယျ။ နောကျဆုံးပျေါတှကေတော့ ဘကျထရီကို လုံးဝကြျောလိုကျပွီး ပစ်စညျးကို ဒါရိုကျ ပါဝါပေးပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သငျ့ပစ်စညျးကို ဘယျအခြိနျမှာ ဘယျလို အဖှငျ့အပိတျလုပျတယျဆိုတာ အရမျးအရေးမပါပါဘူး။
Next: သင့်ဇနီးမယားက သင့်ကို သိစေချင်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု အကြံဉာဏ် ၁၅ ခု